यिनै हुन आज दु’र्घटना हुदा अ’कालमै ज्यान गु’माएका आमा छोरा ! – Online Khabar 24
Online Khabar 24
यिनै हुन आज दु’र्घटना हुदा अ’कालमै ज्यान गु’माएका आमा छोरा !
September 28, 2021 by admin admin
छोरालाई कलेजको गाडी चढाउन सडकमा निस्केकी आमा र छोरालाई ट्रकले ठ’क्क’र दिँ’दा दुवैजनाको मृ’त्यु भएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा ट्रकको ठ’क्क’रबाट आमाछोराको मृ’त्यु भएको हो ।
सैनामैना नगरपालिका वडा नं ५ बुद्धनगरकी ४२ वर्षीया राधा भट्टराई र उनका छोरा २१ वर्षीय महेश भट्टराईको मृ’त्यु भएको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलल‍े जानकारी दिएको छ । स्थानीयका अनुसार छोरालाई कलेज पठाउनका लागि छोरालाई गाडीसम्म छोड्न आमा आएकी थिइन् ।
पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना ८ ख ४४११ नंको ट्रकले पैदल यात्रा गरिरहेका भट्टराई आमाछोरालाई ठ’क्क’र दि’एको थियो । सो दुर्घ’टनामा ग’म्भीर घा’इते भएका उनीहरूलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल लैजाँदै गर्दा मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै यता भक्तपुरको सल्लाघारीमा गएराति भएको दु’र्घटनामा एक जनाको ज्या’न गएको छ ।
राति पौने ९ बजे भारतीय नम्बर प्लेट आर जे ०२ जी बी १९१७ नम्बरको १८ चक्के ट्रकले ठ’क्कर दिँदा प्रदेश ३–०२००८ प २५०१ नम्बरको मोटरसाइकलका चालक भक्तपुरको बालकोट बस्ने ४५ वर्षका गणेश रजौराको ज्या’न गएको हो ।
ट्रकका चालकलाई प्रह’रीले प’क्राउ गरेको छ । यो खबर उज्यालो अनलायन बाटसा साभार गरियको हो ।
Prevडर होइन, जहाज उडाउन पाउँदा गर्व महसुस हुन्छ।’ : पाइलट पेमा लामा ( भिडियो )
next७७ जनाको ज्यान जोगाउने क्याप्टेन शेर्पासँग रहेकी यी महिला को-पाइलट को हुन् जान्नुस ? (भिडियो सहित )
उडिरहेको विमानको ट्वाइलेटबाट तपाइ कै टाउकोमा मलमुत्र खस्यो भने के हुन्छ ? त्यही भयो यहाँ
पल शाहसँगको समन्धबारे समाचार बाहिरिएपछि समिक्षा अधिकारीले लेखिन यस्तो भाबुक स्टाटस
अनन्यालाई एनसीबीको प्रश्न : आर्यानले ड्र’ग्स खाएको देख्नु भएको छ ?
एकैपटक जन्मेका तिम्ल्याहा दिदीबहिनी एकै पटक बने ग’र्भवती !
४९ वर्षमा भारतीय चर्चित नायक गोबिन्दाले नेपाली चेली सुनितासँग दोस्रो विबाह गरेको रहस्य यस्तो !
बजाज मोटरसाइकल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यो पढिहाल्नुस
िय राशीका ब्यक्तीहरू अाजको दिन निकै सतर्क हुनुहोला अन्यथा अाइपर्न सक्छ यस्तो अापत् ! हेर्नुहोस आज २०७८ कात्तिक ७ गते आइतबारको राशिफल
बाचे भने फर्किएर आउछु । फेरी बिनिताको घरमा दुखको खबर । (हेर्नुहोस भिडियो)
यस दिशामा नराख्नुहोस् कुचो, निम्त्याउन सक्छ घरमा बर्बादी !
बिहान मुख धुँदा साबुनको सट्टामा प्रयोग गर्नुहोस् यी चिज, मिल्छ प्राकृतिक सुन्दरता !